घरबाट भागेर काठमाडौं छिरेकी अञ्जली अधिकारीले सार्बजनिक गरिन यस्ता तस्बिर, मोहित पार्ने रूप, फिदा बनाउने फिगर…..(२० तस्बिर सहित) – Sanjal Nepal
[ April 11, 2021 ] दैव पनि कति निष्ठुरी ? श्रीमति अस्पतालमा श्रीमानको अबस्था यस्तो ३ बर्षीय छोराको विचल्ली (भिडियो) भिडियो
[ April 11, 2021 ] गर्भवती पेट देखाउने होड : मातृत्वको गौरव कि विदेशीको नक्कल ? स्वास्थ्य /जिबनशैली
[ April 11, 2021 ] यौ; नांगको रौं ह’टाउनु कति उचित कति अनुचित ? मनोरंजन
[ April 11, 2021 ] ६ गर्भवती महिला लिएर साथीको विवाहमा पुगेका युवकले भने,‘यी सबै बच्चाको पिता म नै हुँ’ स्वास्थ्य /जिबनशैली
[ April 11, 2021 ] पै’सा लिएर पनि शा:रीरिक स:म्पर्क गर्न नदिएको भन्दै जनकपुर मा एक युवकले महिलालाइ गरे राम धु:ला’ई (भिडियो हेर्नुहोस्) समाचार
Homeसमाचारघरबाट भागेर काठमाडौं छिरेकी अञ्जली अधिकारीले सार्बजनिक गरिन यस्ता तस्बिर, मोहित पार्ने रूप, फिदा बनाउने फिगर…..(२० तस्बिर सहित)
घरबाट भागेर काठमाडौं छिरेकी अञ्जली अधिकारीले सार्बजनिक गरिन यस्ता तस्बिर, मोहित पार्ने रूप, फिदा बनाउने फिगर…..(२० तस्बिर सहित)
January 3, 2021 admin समाचार 1106
अञ्जली अधिकारी बर्दियाको मैना पोखरी स्कुलमा पढ्ने गर्थिन् । त्यति बेलाको समयमा बर्दियामा महोत्सव आयोजना हुने कुरा आयो ।उक्त महोत्सवमा बद्री पंगेनी, शङ्कर बिसी, पशुपति शर्मा लगायतका कलाकारहरू उपस्थित भएका थिए ।
सानै देखी नाच्न भनेपछी हुरुक्कै हुने अञ्जली अधिकारी बर्दियाको महोत्सव सम्म पुगिन् ।त्यति बेला गीत गाउने पालो गायक बद्री पंगेनीको आयो । पंगेनीले हातमा माइक समातेर भने जब सम्म गीत गाउँछु, त्यो बेलासम्म नाच्नेलाई पुरस्कार दिनेछु।बद्रीले गीत गाउन सुरु गरे ।
अन्जली लगायतका धेरै सहभागी पुरस्कारको लागि नाच्न थाले ।बद्रीले लगातार एकपछि अर्को गीत गाउँदै गए, अरु सहभागीहरु थाके । तर, अञ्जलीले अन्त्यसम्म नाचिरहिन् र ५ सय पुरस्कार पाइन् । त्यही मौकामा उनले बद्रीलाई आफ्नो नृत्यमा रुची हुनुका साथै म्युजिक भिडियो तथा चलचित्र खेल्ने रहर लागेको बताइन् ।
बद्रीले ‘हुन्छ’को आश्वसन दिए । एसएलसीपछि भागेर काठमाडौं ल पढ्दा शिक्षक र साथीहरुले अन्जलीको नृत्यको प्रशंसा गर्थे तर, परिवारमा आमाको मात्र समर्थन थियो । ‘बुबा र दाइ म नाचेको पटक्कै मन पराउनु हुन्नथ्यो’, उनी सम्झन्छिन् । २०७२ सालमा एसएलसी परिक्षा दिएपछि अन्जली भागेर काठमाडौं आइन् ।बद्री पंगेनीलाई सम्पर्क गरेपछि उनकै निरमाया दोहोरी साँझमा काम पाइन् । उनी भन्छिन्, ‘हिराले हिरा चिन्छ रे ।
उहाँले मेरो प्रतिभालाई चिन्नुभयो ।’ भिडियो खेल्न घरबाट भागेकी अन्जली दोहोरी साँझमा नाच्न थालिन् ।दोहोरी साँझमा काम गरेको भनेर नराम्रो नजरले हेर्ने अप्ठ्यारो पनि झेलिन् । तर, दोहोरी साँझ नै उनका लागि नृत्य सिक्ने पाठशाला बनिदियो । एकवर्ष काम गरेपछि बद्रिले एउटा गीतमा मोडलिङ गर्ने अवसर दिए ।
बद्री र मिरा गिरीको स्वरमा रहेको ‘खर बारीमा’ बोलको गीतमा अञ्जली पहिलो पटक देखिइन् । त्यो समय बद्री पंगेनीको गीतबाट डेब्यू गर्नु पनि उनको लागि ठुलो सफलता थियो ।पहिलो भिडियोमा आफ्ना कमजोरी अञ्जलीले महशुस गरिन् ।
स्टेज र क्यामेरामा नाच्च फरक रहेछ’, अन्जली भन्छिन्, ‘आफ्नो कमजोरी आफैं पत्ता लगाएर सुधार्न थालेँ । बद्री पंगेनीले लगातार तिन पटक मौका दिएपछि अन्जलीलाई भिडियोमा अफर आउन थाल्यो ।पशुपति शर्मा र सम्झना भण्डारीको तीज गीत ‘मेरो माया बसेको ठाउँमा’मा अभिनय गरेपछि उनलाई दर्शकले चिन्न थाले ।बोल माया’बाट व्यापकता अञ्जलीले काम गरेको करिब २०० भन्दा बढि भिडियोमध्ये आधामा प्रकाश सपुत पनि थिए ।अन्जली जस्तै भिडियो मोडलिङमा जम्न खोजिरहेका प्रकाशले आफैं गीत लेखेर भिडियोका लागि मोडलहरुलाई अफर गरे तर, धेरैले अस्विकार गरे ।
त्यसपछि उनले अञ्जलीलाई सम्झिए । त्यसबेला गाउँ पुगेकी अञ्जलीले गीत पठाउन भनिन् । घरमा त्यो गीत बजाउँदा बुबाआमासहित सबैले मन पराए । गीत मार्मिक थियो ।त्योबेलासम्म बुबा र दाजुले पनि अञ्जलीको रुचीलाई सकारिसकेका थिए ।उनले कोठामा एक्लै बसेर गीत बजाइन् र बेस्सरी रोइन् ।गीतमा डुबेर रोएपछि उनलाई लाग्यो, म यो गीत गर्न सक्छु ।त्यसपछि उनले प्रकाशलाई फोन गरिन्, ‘दाइ, म यो भिडियो गर्छु ।’ सारङ्गी रेटेर गीत गाएको सुटिङ सुरु हुँदै थियो ।
गाउँका धेरै मान्छे रमिता हेरिरहेका थिए । गीत बज्न थालेपछि सबैको आखाँ रसाए ।अञ्जली र प्रकाशको पालोमा रोमान्टिक सिनहरु खिचियो । अन्जलीमा गर्न सक्छु, सक्दिन भन्ने डर बढ्यो ।सिन खिच्न सुरु भयो ।जब गीत बज्यो अञ्जलीमा भू,त चडेजस्तो भयो । उनले साँच्चीकै रुदै सिन दिइन्, जुन भिडियोमा आवश्यक थियो । साँच्चै रोएपनि मिलेको छ वा छैन् भन्ने डर थियो ।सुटिङ सकियो, सबैको मुहारमा चमक थियो ।
तर, अन्जली खुसी हुन सकिरहेकी थिइनन् । जब भिडियो हेरिन् आफ्नो काम राम्रो पाइन् । चुजी बनेकी छन् अञ्जली ‘बोल माया’ को भिडियो सार्वजनिक हुन ६ महिना लाग्यो ।तर, सम्पादनपछि तयार भएको गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा कसैको पनि आँखा ओभानो रहेन ।
युट्युबमा भिडियो आएपछि तुरुन्तै ट्रेण्डिङमा पर्‍यो । धेरैले गीतमा आफ्नो कथाब्यथा पाए । सामाजिक सञ्जालमा गीत भाइरल भयो ।अन्जलीलाई गीत सफल हुन्छ भन्ने थियो तर, यो स्तरको सफलता हात लाग्ला भन्ने अनुमान समेत थिएन ।
नेपालमा टिकटक बन्द हुदै, यस्तो छ कारण, टिकटक बन्द गर्नु (सहि वा गलत ?)
‘अर्कै पुरुषले तीन वर्ष देखि तेरो श्रीमतीको विस्तरामा पुगेको छु’ भनेपछि २५ बर्ष संगै बिताएको आफ्नै श्रीमतीको विहे गरिदिएँ (भिडियो हेर्नुस्)
श्वेता खड्काले श्रीकृष्णको सम्झनामा बनायको माझी बस्ती ( हेर्नुहोस् )
November 22, 2020 admin समाचार 2461
यहाँका माझीहरु माछा मार्ने, ज्याला मजदुरी गर्ने र इन्द्रावती नदीमा बालुवा चालेर दिन बिताउँछन् । आर्थिक अभावका कारण भूकम्पले ढालेको घर बनाउन सकेका थिएनन् । मुस्किलले पानी ओत्ने जस्ताले बारेको कटेरोमा उनीहरुले केही वर्ष बिताए
२८ वर्षीय राजनलाई दुई वर्षीय छोराले पार्थिव शरीरमा दागबत्ती दिए,मलामी सबैका आँखा रसाए
November 9, 2020 admin समाचार 4045
राजविराज, कार्तिक २१ । कात्तिकको चिसो बुधबारको मध्यरात निष्पट्ट अन्धकार छ। राजविराज–हनुमाननगर सडकखण्डमा रहेको खाँडो खोलाको किनारमा शीतले लपक्कै भिजेको जमिन छ। केही परिवारका सदस्य र नजिकका साथीहरूको उपस्थिति छ। खोला किनारमा खनेको खाल्डोमा शव
अनौठो परम्परा भएको समाज, जहाँ कुकुरसँग महिलाको विवाह गराइन्छ
November 9, 2020 admin समाचार 3458
एजेन्सी – विश्वमा विभिन्न अनौठो घटनाहरु भइरहेको हुन्छ । कुनै घटनाहरु सत्य हुन्छन्, तर पत्याउन मुस्कील पर्छ । तपाईलाई थाहा छ, एक महिलाले कुकुरसँग विवाह गरेकी छिन् ।यो अनौठो घटना भारतको हो । भारतको छत्तीसगढको
पै’सा लिएर पनि शा:रीरिक स:म्पर्क गर्न नदिएको भन्दै जनकपुर मा एक युवकले महिलालाइ गरे राम धु:ला’ई (भिडियो हेर्नुहोस्)
LEX 18 agenda conversation: Job club (445175)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (418738)
Hello world! (346049)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (318841)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? (142448)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (115340)
Technology Training Company Coding Dojo to Open Boise Campus at Trailhead (105659)
Brody king On Why He Wouldn’t depart His full Time Job To signal With WWE (99977)
दैविक शक्ति अकला देवी मन्दिर जहाँ आफै शंखघण्ट बज्छ (85164)
खेतमा भेटियो रहस्यमय डल्लो, जाँच गर्दा यस्तो सनसनीपूर्ण खुलासा (84340)